1994 – Year – Burmese Subtitle
The Lion King (1994) The Lion King ဇာတ်ကားကနောက်လဆိုလာတော့မယ်...အဲဒါမထွက်ခင်ဒါလေးတွေဖတ်ထားတော့သူတို့ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိတာပေါ့Live Action ထွက်ရင်လဲတင်ပေးပါဦးမယ် See First ထား....1994 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Lion King I ကို မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ် မှတ်မိဆို မကြာသေးခင်ကမှ The Lion King ရဲ့ live action ထွက်လာတာကိုး ဆိုတော့ . . . The Lion King ကို တစ်ခေါက်လောက် ပြန်တွေးတောကြည့်ရအောင်ဗျာ .."NA A A HHH ZABENYA A A A BAGITHI BABA" ဆိုတဲ့ The Circle of Life ဆိုတဲ့သီချင်းသံနဲ့အတူ စတင်မြင်ယောင်ကြည့်ပါမယ်နေထွက်လာတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းနဲ့အတူ မြင်းကျား သမင် ဆင် စတဲ့တောထဲမှရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်အကုန် အရောင်အသွေးစုံလင်စွာ ထွက်လာတဲ့အချိန် ...
The Shawshank Redemption (1994) မိတ်ဆွေတို့ Google မှာ IMDb rating အမြင့်ဆုံးကားများ လို့ ရိုက်ရှာကြည့်ချင်ပါသလား? Rotten tomatoes ရဲ့ အကောင်းဆုံးကားများလို့ ရိုက်ရှာကြည့်ချင်ပါသလား? ရုပ်ရှင်သမိုင်းတလျှောက်အကောင်းဆုံးကားများ…..မသေခင်ကြည့်သင့်သော ကားများ….ဘာညာသာရကာ အစုံရိုက်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီဇာတ်ကားကတော့ ထိပ်ပိုင်းတစ်နေရာမှာ အမြဲပါနေပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ လူသတ်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ် တစ်သက် ၂ ခါ ကျခံရပြီး ရှောရှန့်ခ် ထောင်ထဲကို ရောက်လာတဲ့ ဘဏ်စီးပွားရေးသမား အန်ဒီ ဒူဖရင်း(Tim Robbins) နဲ့ တကျွန်းသမားဟောင်းကြီး ရက်ဒ်(Morgan Freeman) တို့ ရဲ့ ထောင်ထဲက အခက်အခဲတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဘ၀၊ အန်ဒီရဲ့ ငရဲလို မျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုတည်ဆောက်ပြီး နေထိုင်သွားလဲ၊ လွတ်မြောက်မှုကို ဘယ်လိုရှာဖွေသွားလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါပဲ။ ရုပ်ရှင်လေးက ရိုးရှင်းပေမယ့်….ဒါရိုက်တာတိုင်း အိပ်မက်မိမယ့် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ အော်စကာ လျာထားမှု ...
Forrest Gump (1994) "ကျွန်တော့်အမေက အမြဲပြောတယ် ဘဝဆိုတာ ရသာစုံချောကလက်ဘူးလိုပဲ။ မစားကြည့်ဘဲနဲ့ ဘာအရသာဆိုတာ မသိနိုင်ဘူးတဲ့။" - Forrest Gump - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - လေဆောင်ရာ တလွင့်လွင့်ပါလာတဲ့ ငှက်မွေးဖြူဖြူလေးရယ် ဆဗားနားမြို့တစ်နေရာက ဘတ်စ်ကားစောင့်တဲ့ ခုံတန်းလေးရယ် ဒီခုံတန်းပေါ်မှာ လက်ဆွဲအိတ်ကိုဘေးချ ချောကလက်ဘူးကိုပေါင်ပေါ်တင်ထားပြီး ဖိနပ်မှာလည်းရွှံ့အလူးလူးနဲ့ ဘတ်စ်ကားထိုင်စောင့်နေတဲ့သူရယ်။ ဒီလိုအစချီပြောရုံနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိသတ်တွေဟာ Forrest Gumpကို ပြေးမြင်မိကြမှာ သေချာပါတယ်။ Life is likeabox of choclates ဆိုတာရယ် ...